ဟေ့ကောင်လေးတွေ QUEEFS လိင်စဉ်အတွင်းဖြစ်ပျက်, ကျော်ရ! - သတင်း
ဟေ့ကောင်လေးတွေ Queefs လိင်စဉ်အတွင်းဖြစ်ပျက်, ကျော်ရ!
လိင်နှင့် ပတ်သက်၍ ယေဘုယျအားဖြင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမှာပိုမိုများပြားလာပြီး၊ အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများသည် (amen!) သည်အိပ်ခန်းထဲတွင်သူတို့ကြိုက်သည့်အကြောင်းကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောနေကြသည်။ queefing - လိင်မှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်ကြဉ်ရမယ့်လိင်အကြောင်းအရာအကြောင်းပြောရမယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ မိဖုရားများသည်လိင်ဆက်ဆံစဉ်ကဖြစ်ပျက်ရုံမျှသာမဟုတ်ပါ - ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်တွင်တစ်ချိန်ကယောဂအတန်းတွင်အလယ်အလတ်အောက်ဘက်ခွေးတစ်ကောင်ကိုသတ် မိ၍ ကျွန်ုပ်စိတ်ထိခိုက်နေဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ငယ်ရွယ်ပြီးသူစိမ်းများနှင့်ပြည့်နေသည့်အခန်းတစ်ခန်းတွင်ရှိနေသော်လည်း၊ ငါးနှစ်အကြာတွင်၊ ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဖက်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်အခါတိုင်းရင်ဖွင့်သောအခါတိုင်းကျွန်ုပ်၏အိမ်ထောင်ဖက်များနှင့်ကျွန်ုပ်အလွန်အမင်းတွယ်ကပ်နေဆဲလား။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်၊ ကျွန်တော်စာသားထဲမှာမကူညီနိုင်သောအရာကြောင့်ရှက်မိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် မင်း သူတို့ကိုလည်းကျော်ရသင့်တယ်။
ပထမ ဦး စွာ quefing တစ်ခါမျှမကြုံဖူးသောကံကောင်းသည့်မိန်းကလေးများသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်အကြောင်းပြောနေသည်ကိုမသိသောယောက်ျားလေးများကို - မိဖုရားတစ်ကောင်သည်လိင်အင်္ဂါမှလေကိုထုတ်လွှတ်လိုက်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လိင်အင်္ဂါထဲသို့ ၀ င်ရောက်သောအရာကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော် (ရှေ့ပြောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လိင်မှုပြုခြင်းကဲ့သို့) အတွင်းနှင့်အပြင်သို့ထွက်သွားသည့်အရာတစ်ခုခုကိုထပ်ခါတလဲလဲလေသည်ပိုမိုဖမ်းစားနိုင်သဖြင့်မိဖုရားများသည်များသောအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဟာသဘာဝပဲ၊ မိန်းကလေးတိုင်းလိုလိုမှာဖြစ်တတ်တယ်။
မိဖုရား၌စောင့်ရှောက်ရန်နည်းလမ်းမရှိရုံသာမကလူတစ် ဦး သည်အဘယ်အချိန်၌ဖြစ်ပျက်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့စာသားအတိုင်းပင်ကျွန်ုပ်တို့မပြောနိုင်ပါ။ သူတို့ကသင့်ကိုအံ့အားသင့်စေသလိုသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအံ့အားသင့်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မင်းကိုမင်းတို့ရှင့်ကိုကြည့်ပြီးငါတို့ကိုမကြည့်ပါနဲ့။
အချိန်ကြာမြင့်စွာပထမ ဦး ဆုံးပြီးဆုံးသောသူငယ်! သူမသည်ဆုပ်ကိုင်ဖို့တက်သည်, ငါမကြာမီငါ့ဆိုင်၌သူမ၏ထည့်သွင်းသို့မဟုတ်ငါ့ကို DM drop လိမ့်မည်နည်း သတ္တုချည်မျှင်များ၊ ဖန်ပုတီးစေ့များ၊ ရေထုထည်များနှင့် zirconium clit များဖြင့်ပန်းထိုးထားသောပန်းပုလက်ချောင်းတစ်ခု၊ ။ အမြဲတမ်းလိုပဲငါဟာ gram ထဲမှာအမှိုက်တွေဖြစ်လေ့ရှိပြီးတစ်ပတ်ထဲမှာလ၊ ဘယ်လောက်ပဲသေးငယ်ပါစေမင်းရဲ့ထောက်ပံ့မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကျန်းမာရေးသည်တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်၏အချိန်ပြည့်အလုပ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အ ၀ တ်အစားများ ၀ တ်ဆင်သည်။ သို့သော်သူနှင့်အမြဲတမ်းမျှဝေခြင်းမဟုတ်ပါ ငါမကြာမီမျှော်လင့်ပါတယ်သော်လည်းအချို့သောအသစ်သောအရာတို့ကိုလုပ်နေပါလိမ့်မည်, ဒါကြောင့်ထွက်ကြည့်ရှု?
မျှဝေသည် အဲလစ် Peta Quinn (@petaquinnartist) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်၊
queef အသံကစိတ်ကိုမသတ်ပစ်ဘူးဆိုရင်ငါ 'ငါကျိန်ဆိုတာငါ့ယောနိ' ပဲ၊ ငါမယုံဘူး၊ မင်းငါယုံတယ်၊ ငါဒါကိုအဆင်ပြေတယ် 'လို့ပြောနေတာငါပြောတာကသေချာလိမ့်မယ်။ ပြောစရာမလိုပါဘူး။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သမျှတွင်လိင်အချဆုံးသောအသံမဟုတ်ကြောင်း၊
သင်နှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာတည်ရှိခဲ့သောလိင်ကြင်ဖော်ဖက်နှင့်ဆက်ဆံနေသူတစ် ဦး ၏ရှေ့တွင် Queefing လုပ်ခြင်းသည်တစ်ဝက်ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်းတစ်ညတည်းခိုသည့်အချိန်တွင် queefing သည်မိန်းမအချို့ကိုအိမ်ထောင်ဖက်အသစ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်အမှန်တကယ်စိတ်ပူစေသည်။
သူတို့ဘယ်လိုတုန့်ပြန်မယ်ဆိုတာမသိရပါဘူး (သူတို့ဆိုးဆိုးရွားရွားတုံ့ပြန်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးမင်းနဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့မထိုက်တန်ဘူး) ။ ဒါပေမယ့်တောင်မှတစ်ညနေခင်းမှာကြောက်စိတ်တွေရှိတယ်၊ ငါတို့ဟာ sexy ခံစားချင်တယ်၊ queefs တွေကငါတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုတွန်းလှန်နိုင်လို့ဒါကပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်။
UTIs၊ မျက်ရည်များစီးကျခြင်း (ယောက်ျားလေးများမည်သည့်အခါမျှကြုံတွေ့ရစရာမလို) - queefs များသည်မိန်းကလေးများနှင့်ဆက်ဆံရသည့်လိင်မှုကိစ္စနောက်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အထက်ပါကိစ္စများကဲ့သို့ပင်မိဖုရားများသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်းထဲ၌ထည့်ထားသည့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုတိုက်ရိုက်တုန့်ပြန်သောကြောင့်ယောက်ျားများသည်တာဝန်အချို့ယူရန်လိုအပ်သည်။
အချို့လူများ (အဓိကအားဖြင့်မသိတတ်သည့်အမျိုးသားများ) က queefing သည်လေထဲကိုထုတ်လွှတ်ရန်နေရာပိုများသောကြောင့်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောယောနိ၏လက္ခဏာဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်ကြသည်။ ဒါကလုံးဝ bollocks ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌လေကိုဖိအားပေးသောအခါနောက်ဆုံးတွင်ထွက်လာရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏လိင်အင်္ဂါသည်မည်မျှအရွယ်အစားရှိသည်ဖြစ်စေပုံသဏ္matterာန်မည်မျှပင်ရှိပါစေ၊
သငျသညျ queef-free session တစ်ခုလုံးစီမံခန့်ခွဲလျှင်သင်အံ့ဖွယ်အောင်မြင်ပြီထင်ပေမယ့်သတိပေးခံရ, သူတို့ပြီးဆုံးပြီးနောက်အတော်ကြာခဏတာဖြစ်ပျက်နိုင်ပါတယ်။
ငါ့ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကသူ့ကိုယ်သူ ၀ တ်စားဆင်ယင်ပြီးသူမရဲ့ယောနိကိုမလွှတ်ခင်အချိန်မှာသူမရည်းစားနဲ့စကားပြောဖို့အချိန်ရခဲ့တယ်။ အခြားတစ်ယောက်မှာအဝတ်အစားဝတ်ရန်၊ ကောင်မလေး၏အိပ်ခန်းမှထွက်ခွာရန်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်မိဖုရားကိုမလွတ်မြောက်မီသူ၏အဖော်များနှင့်စကားစမြည်ပြောဆိုရန်အချိန်လုံလောက်ခဲ့သည်။ Queefs မသနားတျောမူပါ။
တောင်းပန်ပါ၊ မကြိုးစားပါနှင့်၊ မအပြစ်မတင်ပါနှင့်၊ ရှက်ကြောက်ခြင်းမပြုပါနှင့်
queefs တွေကိုသုတေသနပြုတဲ့အခါ 'queefs ကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားရမလဲ' အကြောင်းဆောင်းပါးတွေနဲ့ဘလော့ဂ်တွေအများကြီးရေးထားတယ်။ မျိုးရိုးဗီဇ၊ queef-inducing sex ရာထူးနဲ့အရည်အချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိုချုပ်အပြီးမှာ၊ သူတို့ကိုကာကွယ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်က နှင့်ကြားလျှင်သင်စိတ်မပူသင့်ပါတယ်။
Queefs စိတ်ဓါတ်များကိုသတ်, ငါကဒီမလွှဲမရှောင်သည်ထင်နှင့်လုံးဝအဆင်ပြေပါတယ်။ မိဖုရားတစ်ကောင်သည်သင့်ကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာခန့်ထားမည်၊ သင်ကရယ်မောစေမည်၊ သို့မဟုတ်လိင်အင်္ဂါကိုမပြီးမချင်းလိင်ဆက်ဆံမှုကိုရပ်တန့်ရမည်ဟုပင်ပြောလိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်သင့်အားစိုးရိမ်ပူပန်မှုသို့မဟုတ်ရှက်စရာမဖြစ်စေရပါ။
'idgaf' သဘောထားရှိရန်ခက်ခဲသည်။ သို့သော်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုအမှန်တကယ်နားလည်သဘောပေါက်ပါက၎င်းတို့သည်ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ကြုံခံစားရသောအတွေ့အကြုံမဟုတ်ပါ၊ သူတို့နှင့်ပြdefinitelyနာမရှိပါ။ သူတို့လုပ်ရင်? gurl ဖယ်ရှားပစ်ပါ !!!
• ၃ မိနစ်အတွင်းမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဘယ်လိုလုပ်လာမလဲ
• အငယ်ဘ ၀ နဲ့မိန်းကလေးတွေကယောက်ျားလေးတွေကိုလိင်ဆက်ဆံတာကိုသိစေချင်တယ်
• မိန်းကလေးများသည်လိင်ဆက်ဆံစဉ် ၄ င်း၏အလံအနီရောင် ၄၁ လုံးကိုမျှဝေကြပြီးသင့်အားတုန်လှုပ်ချောက်ချားစေလိမ့်မည်